August 31, 2021 1598
ताप्लेजुङका भरतमणि पौडेलले कमेडी च्याम्पियनको गएको एपिसोडमा पूर्वयुवराज पारस शाहको क्यारिकेचर गरे । उनको प्रस्तुतीले निकै चर्चा बलुटेको छ ।
जो कमेडी च्याम्पियनमा आउनु`अघि यस क्षेत्रमा आफूलाई चिनाउन संघर्षरत थिए । युट्युवमा उनका केही भिडियो पहिल्यै हिट भइसकेका थिए । यद्यपि, कमेडी च्याम्पिय`नको मञ्च पाएपछि उनको पहिचान रातारात उचाइमा पुगेको छ ।
भरतम`णिको फिजि`कल अडिसन सामान्य थियो । तर, त्यसपछिका प्रस्तुतिहरुमा उनले आगो बाले । एपिसोड ६ मा उनले गरेको पुण्य गौतम र हिमेश पन्तको क्यारि`केचरले धुम मच्चाएको थियो । त्यहीँबाट उनी दर्शकको नोटिसमा पर्न थालेका हुन् ।
उक्त प्रस्तुतिमा कमेडी च्याम्पियनका पूर्वविजेता हिमेश`लाई व्यंग्य गर्दै भरतमणिले भनेका थिए, ‘कमेडी च्याम्पियनले खासमा पुरस्कार नै गलत राखेको हो । कार होइन, ट्याक्टर राख्नुपर्थ्यो, हिमेशले कम्तिमा खेत जोतेर जीविका चलाउँथे ।’
१५ औं एपिसोडमा भरत`मणिले आफ्नो बेस्ट दिए । त्यसमा उनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसहित विभिन्न नेताहरुको दुरुस्त क्यारिकेचर गरेका थिए । र, त्यसमा कन्टेन्ट पनि उत्तिकै बलियो थियो ।
भरत`मणिले गरेको गोकुल बास्कोटाको क्यारिके`चर त स्वयम् गोकुल बास्कोटा नै झुक्किने खालको थियो । ‘हेप्नी ? मान्छेलाई डिस हान्नी ? औडा अर्नि ? यस्तै–यस्तै कुरा गर्यौ भने भाइ, हामी मान्छेहरु नि कोल्याप्स गरिदिन्छौं ।’
गोकुलको आवा`जमा भरतमणिले बोलेको यो डाइलग टिकटकमा यति चल्यो कि धेरैको जिभ्रोमै झुण्डियो । सोही प्रहसनमा भरतले गरेको राजा ज्ञानेन्द्र, रामनारायण बिडारी, राजेन्द्र महतो`लगायतको क्यारिकेचर पनि कम्ति टेसिलो थिएन । त्यसपछिका एपिसोडमा पनि उनले आफ्नो स्तर कहिल्यै तल झर्न दिएनन् ।
भरत`मणिले गरेको पारसको क्यारिकेचरका बारेमा त धेरै चर्चा भइसकेको छ । यसमा उनले पारसको आवाज मात्र नभएर हाउभाउ पनि दुरुस्त उतारेका छन् । उनले पारस`का हुलियामा गरेको डान्स स्टेप टिकटकमा भाइरल भएको छ।
उनको प्रस्तुती पा`रसले पनि हेरेका छन् । क्यारिकेचर हेरे`पछि छक्क परेको श्रोतको भनाई छ । उनले भरमणीलाई धन्यवाद दिएका छन् । पारसले उन`लाई फोन गरेर धन्यवाद दिएका हुन् ।
ठूलो दायरामा काम गर्छन् भरतमणि । खासमा उनी कमेडी`का प्याकेज हुन् । त्यसमा पनि उनको सबैभन्दा बलियो पक्ष क्यारिकेचर हो । आजकाल क्यारि`केचर गर्ने कलाकारहरु धेरै जन्मेकाले यो विधा`लाई हल्का रुपमा पनि लिन थालिएको छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, केपी ओली, प्रचण्ड, देउवा, माधव नेपालजस्ता नेताहरुको क्यारि`केचर गर्ने धेरै कलाकार छन् । उनीहरुको क्यारि`केचर हेर्दाहेर्दा दर्शक नै बोर भइसके । भरतमणिले भने पूवयुवराज पारसदेखि रामना`रायण विडारी, पुण्य गौतम मात्र नभएर हिमेस पन्त`सम्मको क्यारिकेचर गरेर दर्शक`लाई नयाँ स्वाद दिएका छन् ।
भरतमणि कमेडीको फुल डोज पस्किन सक्छन् । उनको प्रस्तु`तिमा विविधता भेटिन्छ । कमेडी च्याम्पि`यन जिते पनि वा नजिते पनि उनी लामो रेसका घोडा हुन् । भोलीका दिन नेपाली रंगमञ्चमा छाउन सक्ने सम्भावना बोकेका कला`कार हुन् उनी ।
Prev१३ वर्षमै पिता बनेका यी बा’लकको घत-लाग्दो कहानी यस्तो छ:
Nextदुःखद खबर: कलाकार निशा घिमिरेको मृ`त्यु
बिवाह चलिरहँदा बेहुला प्रेमिका लिएर मण्डपबाट भागे-पछि बेहुलीले जन्ती सँग बिहे गरिन्…
खुशीको खबर: पाँच महिनापछि खुल्यो अन्तर्राष्ट्रिय उडान..
पुष्पालाई यती धेरै माया गर्छन् बालिकाहरू, हामी मामुको आफ्नै छोरी हो (भिडियो सहित)
मृत`क सबिता भण्डारीका श्रीमान पहिलो पटक मिडियामा, भन्छन् म निर्दोष छु (भिडियो सहित)
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (104106)
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (100076)
एक पिता जो छोरी लिन स्कुल पुग्दा उनको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।सबैले पुरा पढ्नुहोला (64831)